Home Wararka Safiirkii hore ee Itoobiya ee Jabuuti iyo Kenya oo hada loo soo...
Safiirkii hore ee Itoobiya ee Jabuuti iyo Kenya oo hada loo soo magacaabay Soomaliland. Maxa isbadalay?
Dowlada Itoobiya aya waxaa ay magacaawday Shamsudin Axmed Roble in uu noqda safiirkeeda cusub ee Soomaaliland. Shamsudin ayaa ah shaqsi aqoon buuxda u leh arimaha Soomaaliya qayb wayna ka soo qaatay dagaalkii ka dhanka ahaa shacabka Soomaaliyeed. Markii Itoobiya ay dagaalka ku soo qaaday Maxakiimta Shamsudin waxa uu ahaa safiirka Itoobiya u fadhiyay dalka Jabuuti.
Waxaa dad badan la yaabeen sababta keentay in Siyaasi safiir ka soo noqday dalalka jaarka la ah Soomaaliya in loo soo magacaabo Soomaliland waqtigan kala guurka ah. Talaabadaan uu qaaday Abiy Axmad ayaa waxa ay sii adkeyn doontaa xiriirka Soomaaliland iyo Itoobiya kaas oo ay ka dhaxeeyso iskaashi dhaqaale iyo mid Amni.
Madaxweyne Farmaajo ayaa horay ugu faanay in uu albaabada ka soo xiray Soomaliland iyo dowlad Goboleedyada, Hadaba magacaabista Shamsudin ayaa waxa ay marqaati ka tahay in aan waxba iska badalin siyaasadda Itoobiya ee ku wajahan Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa noqday aalad la istcimaalo iyada oo loo fududeeyay in loo qabto shaqooyin lagu dagaalayo shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo. Dhanka kale hadalka sheegayo in Shamsudin yahay Qunsul waa waxba kama jiraan mana aha siyaasada Itoobiya in safiir qof ahaan jiray loo soo magacaabo qunsul. Shamsudin kama amar qaato safaaradda Itoobiya ee Muqadishu balse waxa uu toos u hoos yimaadaa Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Itoobiya.
Shamsudin ayaa la sheegayaa in uu yahay nin ka soo jeeda beesha Gadabuursi ee degta deegaanka Soomaaliland, Waxaana uu xiriir fiican la leeyahay dowladda Soomaaliland gaar ahaan waxa uu waxbadan caawiyay qadiyada Soomaaliland sanadadii uu Madaxweynaha ka ahaa Madaxweyne Riyaale Kaahin
Previous article(Akhriso) Mooshinkii MW. Farmajo oo laga noqday
Next article(AQRISO:-Xildhibaano ka horyimid Go’aankii Gudoomiye Mursal
Puntland oo soo gaba-gabeeysay sixitaanka Imtixaanka Shahaadiga ah ee 8-aadka
Wasiir Janan oo ka hadlay qaabkii uu ku soo baxasaday